Ihe mgbakwunye WordPress: Mepee vidiyo na Lightbox na Elementor | Martech Zone
Ihe mgbakwunye WordPress: Mepee vidiyo na Lightbox na Elementor
Sunday, October 18, 2020 Sunday, October 18, 2020 Douglas Karr
Anyị ejiriwo ndị ahịa ejiri ya rụọ weebụsaịtị Elementor, a kediegwu Dọrọ na dobe edezi ngwa mgbakwunye maka WordPress na-agbanwe ka ọ dị mfe iji wuo mgbagwoju anya, mara mma layouts na-anabata… na-enweghị mmemme ma ọ bụ mkpa ịghọta shortcodes.
Elementor nwere ụfọdụ adịghị ike, otu n'ime ha gbagara m ịrụ ọrụ na saịtị ndị ahịa. Naanị ha chọrọ bọtịnụ mepere vidiyo na Lightbox… ihe Elementor anaghị enye. Nwere ike ịrụ ọrụ na esemokwu ahụ site na iji ihe oyiyi na ma ọ bụ na-enweghị bọtịnụ egwu… mana Elementor nwere nnukwu bọtịnụ bọtịnụ. O juru m anya na ha enyeghi nke a n’ime igbe.
Obi dị m ụtọ, enwere ngwa mgbakwunye maka nke ahụ!
Ihe mgbakwunye dị mkpa maka Elementor
Obi dị m ụtọ, enwere ọtụtụ mgbakwunye maka Elementor n'ahịa. Ikwesiri ịkpachara anya mgbe ị na-ahọrọ onye nrụpụta mgbakwunye. Inwe saịtị WordPress nke wuru na Elementor na-emepụta ịdabere na Elementor. Mgbe ahụ, ịnwe mgbakwunye nke onye na-ere ahịa ọzọ wuru na-emepụta ntụkwasị obi ọzọ. Ọ dị oke mkpa na ịga nke ọma na saịtị WordPress gị iji hụ na onye nrụnye mgbakwunye nwere ọtụtụ ntinye na njikọ ndị metụtara ya iji kwado ma melite plugins dị ka nsụgharị nke WordPress na Elementor na-emelite.
Otu ngwa mgbakwunye dị egwu bụ Ihe mgbakwunye dị mkpa maka Elementor. Na ihe karịrị 800,000 nrụnye, ngwa mgbakwunye nwere ike ịbụ ihe mgbakwunye kachasị ewu ewu mgbakwunye mgbakwunye maka Elementor na ahịa. Akụkụ dị mkpa na ngwa mgbakwunye a bụ ikike ịgbakwunye ma hazie igbe ọkụ maka WordPress saịtị gị wuru Elementor.
Bọtịnụ Elementor Lightbox
Ozugbo ị wụnye ụdị akwụ ụgwọ nke Mgbakwunye dị mkpa maka Elementor ngwa mgbakwunye, gbanye ya Lighbox & Modal Njirimara iji lelee mmewere na Elementor ọcha gị. Mgbe ahụ ị nwere ike ịchọ ma dọrọ ya n'ime ibe gị ngwa ngwa:
Mgbe ahụ ị ga-achọ gbanwee ntọala di na nwunye maka mmewere:
Tọọ Ntọala> Na-akpalite Bọtịnụ Pịa
Tọọ Ntọala> Typedị na Button
Ntọala Ntọala> Ederede bọtịnụ
Tọọ Ọdịnaya> Pịnye na Njikọ peeji / vidiyo / maapụ
Tọọ Ọdịnaya> Nye Peeji / Video / Map URL gị Video URL
Nwere ike hazie igbe ọkụ na bọtịnụ bọtịnụ ka ọ dị mkpa. Ọ bụ ahụmịhe na-enweghị ntụpọ n'etiti mgbakwunye na Elementor.
Ọ bụ ezie na atụmatụ ahụ nwere ike ịba uru ịkwụ ụgwọ, Ihe mgbakwunye dị mkpa maka Elementor ngwa mgbakwunye nwere ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ gụnyere ma na mbipute na akwụghị ụgwọ. Mara: Lightbox arụmọrụ dị n'ụdị akwụ ụgwọ.
Ihe mgbakwunye dị mkpa maka Elementor: Elements Nwere
The free version nwere ụfọdụ isi ihe nwere ike kwukwara:
Ozi Igbe - Gosiputa isi ihe omuma na Ugbo Ama site na itinye akara ngosi di n’elu ma tinye ihe mmegha.
Advanced nkwekọrịta - gosipụta ọdịnaya, mee ka akara ngosi toggle, jupụta akụkụ nke nkwekọrịta na ederede achọrọ & mee ka ọ dị ka mmekọrịta maka ndị na-ege ntị.
Woo Ngwaahịa Grid - Ngosipụta ngwaahịa WooCommerce n'ebe ọ bụla ma gosipụta ngwaahịa site na otu, mkpado, ma ọ bụ àgwà. Mfe tinye hover mmetụta na okirikiri nhọrọ ukwuu na-eme ka ọ pụtara.
Tụgharịa Igbe - Gosiputa ọdịnaya mara mma yana ntụgharị ihu aka ekpe / aka nri na hover.
Taabụ di elu - gosiputa isi ihe omuma na nmekorita nke na akwado nkwado nke emebere uzo eji eme ihe iji me ka ndi na-ege nti.
Isiokwu ọnụahịa - mepụta tebụl ịnye ọnụahịa dị irè na njiri mara mma iji nweta ahịa karịa ndị na-achọ ịzụ gị.
Foto kwekọrọ - gosipụta ihe onyonyo gị site na ịtụnanya na pịa mmetụta site na iji EA Image Accordion.
Grid Post - gosiputa otutu blog posts na nhazi okporo. Nwere ike ịhọrọ nhazi nhọrọ gị site na ntọala ntọala, tinye ihe nkiri na ya, ma mee ka ọ dị ka mmekọrịta maka ndị ọbịa.
Kpọọ ka Action - Style oku gị na ime ọdịnaya, agba, na njikọ ya na-eduzi ndị ọbịa ka ihe ha chọrọ.
ngụda - Mee ma chepụta oge site na nhọrọ nke ụdị dị iche iche.
Usoro iheomume - gosipụta blog posts, peeji nke, ma ọ bụ omenala posts na pụtara vetikal okirikiri nhọrọ ukwuu. Nwere ike ịtọ ọnụ ọgụgụ ị họọrọ, tinye mmetụta dị ịtụnanya, mkpuchi ihe oyiyi, bọtịnụ, na ndị ọzọ iji dọrọ mmasị ndị na-ege ntị.
Osisi Filtable - Gosiputa onyonyo di iche iche, uzo ndi ozo, ma hazie ihe ndi ozo iji hu na ha puru iche.
Budata ihe mgbakwunye dị mkpa maka Elementor
Ihe mgbakwunye dị mkpa maka Elementor: Ihe ndị akwụ ụgwọ
Site na ugwo a kwụrụ ụgwọ, ị ga-enweta ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-enye ike kachasị na isiokwu gị Elementor.
Lightbox & Modal - gosi vidiyo gị, onyonyo, ma ọ bụ ọdịnaya ndị ọzọ na popup. Nwere ike ịtọ omume mmeghe achọrọ, tinye ihe ngosi, ma tọọ ntọala iji bulie njikọ aka.
Nkọwa onyogho - nye ndị nwere ike ịzụ gị ikike iji tụnyere ihe onyonyo ngwaahịa gị abụọ (Old na New) n'ụzọ dị ịtụnanya.
Akara Carousel - họta ọchicho carousel gị, tinye akara ngosi ma mepụta ihe ngosi iji gosipụta ndị ahịa gị ma ọ bụ ndị mmekọ ọmarịcha.
Parallax Mmetụta - kwe ka ndị ọbịa gị nweta saịtị gị site na iji mmetụta dị iche iche na-arụ ọrụ nke nwere ọtụtụ ihe na-emetụta mmekọrịta òké.
Akon - Tinye isiokwu na-adọrọ adọrọ, ọdịnaya dị n’ime, ọdịnaya oke oke, na onyonyo mara mma iji dọta mmasị onye ọbịa.
Ọdịnaya Toggle - Tinye mmetụta hover na ọdịnaya gị nke na-egosipụta esemokwu ị chọrọ ka ndị ọbịa gị lekwasị anya.
Google Maps - Hazi a mmewere map, tinye welara akara ngosi, na-eme ka ọ na mmekọrịta maka ọbịa.
Mmetụta Mmetụta - gbakwunye ngalaba okike na weebụsaịtị gị iji mee ka ọ pụta ìhè.
Kaadị mmekọrịta - weta ike dị elu dị ka ịpịgharị dị n'ime na hover na ọdịnaya gị.
Ihe di n’ime echedoro - machibido ọdịnaya site na paswọọdụ ma ọ bụ site na ọrụ onye ọrụ.
Gbochie Post - gosiputa ederede blọgụ gị na ụdị ụdị dị iche iche site na iji ike nke CSS Flex nke oge a. Nwere ike ịhọrọ nhazi, tinye ihe nkiri, tinye akara ngosi, ma mepụta ihe niile - gụnyere mmetụta hover.
Ngwaọrụ Advanced - tinye tooltips n'elu na n'okpuru ọdịnaya.
Otu Ntugharị Peeji - wulite otu weebụsaịtị na obere clicks jiri Elementor.
Akaebe Slider - mepụta bọọdụ mkparịta ụka na-egosipụta ọtụtụ nyocha mara mma n'otu mpaghara ọdịnaya.
Instagram - nwudo nleta onye nleta na saịtị gị ma chụpụkwuo ndị na-eso ụzọ Instagram site n'igosi ndepụta Instagram na saịtị gị.
Hotspot Image - gbakwunye ebe ihe onyonyo di na mpaghara site na iji ngwa oru eji eme ihe, ka onye oru wee pinye aka na hotspot ekpughere ederede emetutara
Otu nhọrọ na ngwa mgbakwunye nke m nwere ekele maka ya bụ ikike iji mee ma ọ bụ gbanyụọ nke ọ bụla n'ime saịtị ndị a. Nke a na-egbochi efefe nke ọ bụla atụmatụ si edemede a na-atụkwasịkwara gị na saịtị.
Tags: buttonelementorelementor tinye-onselementor bọtịnụvideo ọkụWordPressnchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọwordpress plugin
Elementor: Onye nchịkọta akụkọ magburu onwe ya maka ịsepụta Mara mma WordPress peeji na posts
Etu ịtọlite ​​Lighting 3 maka vidio gị